सम्बोधन गरिनु पर्ने सुरक्षा चुनौती
किन बनेन सुरक्षा नीति ?
प्रस्तावित सुरक्षा नीतिमा के छ ?
काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरीले आफूले नियन्त्रणमा लिइएको ब्यक्तिलाई के कारणले लिइएको हो भनि जनाउ दिने सुचना पुर्जी दिने अधिकार सरकारले उसलाई थमाएको छ । नेपाल प्रहरीले आफनो क्षेत्राधिकारमा पर्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई नदिन चौतर्फी प्रयास समेत गर्‍यो । झण्डै एक महिना लामो चलेको दुई सुरक्षा निकाय बिचको रस्साकस्सीमा सशस्त्र प्रहरी बल हाबी भयो ।
त्यसको बदला लिन यता नेपाल प्रहरीले नयाँ संविधानको मस्यौदामा सशस्त्रको ‘प्रहरी’ भन्ने शब्द नै हटाइदिन कसरत सुरु गरेको छ । दुई वटा सुरक्षा निकायको नाम एकै हुदाँ अन्यौल पैदा भएको र हुने भन्दै हटाइदिन राजनैतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर कसरत सुरु गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनाको १४ औं बर्षसम्म सशस्त्रको नामका कारण समस्या आएको थिएन । तर जब नेपाल प्रहरीको पक्राउ अधिकार सशस्त्रले अशं लगाए झै गरेर बाँड्यो, त्यसपछि यि दुई संगठन बिचको दुरी समेत बढेको छ ।
सुचना जारी गर्ने अधिकार पाए लगत्तै सशस्त्र प्रहरी बलले गरेका क्रियाकलाप समेत बिबाद मुक्त छैनन् ।…